SEENAA AJAA’IBA ADDUNYAA BARUMSAA KEESSATTI HAALA HIN BARAMNEEN DA’IMA 10’niin HOJJETAME!-Temesgen Atnafu Mulatu – Beekan Guluma Erena
SEENAA AJAA’IBA ADDUNYAA BARUMSAA KEESSATTI HAALA HIN BARAMNEEN DA’IMA 10’niin HOJJETAME!-Temesgen Atnafu Mulatu	Beekan Erena
Education July 6, 2016OROMO
141SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
SEENAA AJAA’IBA ADDUNYAA BARUMSAA KEESSATTI HAALA HIN BARAMNEEN DA’IMA 10’niin HOJJETAME!
Baay’ee keenyaaf gara kollejii(yunibaarsiitii) ebbifamuun yoo xiqqaatee xiqqaate waggaa 18 gaafachuu danda’aa. Namoota tokko tokkoof garuu hamma sana waan itti fudhatu mitii. Ijoolle tokko tokkof utuu umuriin isaanii osoo mana kudhaa keessa hin seeniin yeroo isaan itti PHD isaanii fudhatan agarraa. Armaan gaditti ijoolle kollejii ykn yunibarsiitiin addunyaa keenyaa arganii hin beekne kan dandetti adaa qabaachuu isaanii umurii baay’ee ijjolle ta’anii ebbifaman waliin ilaala.
1) MIKA’EL KIRNEY
Nama qaama midhamaa kessatti rakkoo waa irranfachuu baay’isuu qabaachuun yoo sammuu yaadu qabaatte galma kee irraa si hin hambisuu yaada jedhu nama mirkaneessedhaa. Yeroo reef ganna afur ta’u Formulaa heregaa John Hopkinsiin gaafii dhihaatee utuu hin baratiin fure. Dandeetti inni herrega irratti qabu kun waan baay’ee isa gargaaruun yeroo waggaa 6 mana barumsaa sadarkaa lammaffa (high school) irra ebbifamee. Baruma sana gara koleejji Santaa Jorj deemuun yeroo ganna saddet ta’uu barumsaa wagga lamaa Ji’oloojiin (Associates in geology) ennaa fudhatu yeroo ganna 10 ta’uu digiirii isaa harkaan galfachuun akka addunyaatti nama ijoollumaan Yunibarsiitii ebbifamee jdhamuu beekamee. Achumaaniis Biochemistiriin Digirii lammata erga fudhatee booda yunibarsiiti Vandderbit irra utuu barsiisuu Diggirii lammafaa kanbiraa Saayisii Komputaraan hojjetee.
2) MOSHE KAHI KAVAALIN
Fedhii olaanaa inni Astrophysics’f qabuu daa’ima kana fulduratti akka inni deemuuf humna ta’eefi.Yeroo kollejii baha Los Anjels seenuu reef ganna saddet ta’uus bara 2009 qaphxii 4’n kabaja guutuu argachuun eebbifamee. Akka eebbifameenis kollejiitti utuu hin ariifatiin waggaa tokkoof boqochuun bishaan daakuu, kitaaba barreesuufi oggumaa Marshaal aartii isaa qaruu irratti dabarsuuf murteessee. Garaa kollejiitiis deebii’uun digirri isaa Astrophysic’s xumuruuf karoorfaatee. Garuu yeroo waggaa 11 Digirii fi Isportiin waan guddaa irra gahee waan jiruuf ariifachuun isa hin barbaachisnee.
3) ALIYA SABUR
Daa’ima ji’aa saddetii taatee dubbisuu eegaluu ishiin dandeetti adaa qabaachuu ishii warri ishii akka beekan goote. Akumaa ijoolee kaanii barumsaa sadarkaa tokkofaa haa eegaltu malee barsiisotnii ishii yeroo gubuu isheerra yoo kollejii hordofte wayya jechuun kutaa 4 irra garaa yunibarsiitii Stony Brook akka seentuu yeroo waggaa 10 Digirii ishii eegalte. Yeroo wagga 18 taatuu Pirofeesera guutuu Yinbarsiitii nama ijjolummaan ta’ee jedhamuun galmee beektotaa irratti galmooftee. Karaa Fiildii ishee Qoranoof qo’anoo baay’ee nama hojjete ennaa taatu, Badhaasaa garaagaraa NASA, rayya ittisa biyyaa , GAANN (Graduate Assistance in Areas of National Need), fi NSF (National Science Foundation) irraa argateetti. Dabalataan Muziiqaanille kenna gudda qabdii.
4) ADRAGON DE MELLO
Seenaa nama gaddisiisu baratoota kurnan eeraman keessa nama qabudha. Dhiibba abba isaafi cimina isaan ganna 11 tti Heregaan digirii jalqabaa Yunibarsiitii Kaliforniyaa, Santaa kiruz irra fudhate.Abbaan isaa yeroo inni PHD argatuu , barsiisuu fi Badhaasa Nobelii utuu ganna 18 hin guutin argatuu arguuf gahee. Waan inni argamsiise kun maatii isaatti waan bay’ateef hariiroo inni maatii isaa waliin qabu akka jijjiramu godhee. Ergaa maatii isaa waliin adda bahee booda yeroo muraasaaf gara mana guddistuu ijjoolee demuun erga dabarsee booda harmee isaa biratti deebi’ee jiraachuu eegalee. Barumsaan hamma kana haa guddatuyyudha malee waa hundaa dhiisuun mana barumsaa maatiin giddu galeessa keessa baratan seenee. Har’aa mana kuusaa midhaanii keessa hojjechaa kan jiru ennaa ta’uu gara fuula duraatti kaayyoo Kaampaanii haallu waliin hojjechuu qabetee jiraa. Barumsaan waan innii irra gahee turee abjuu abbaasaa akka ture dubbataa.
5) GREGORY SMITH
Yeroo ji’aa 14 kitaaba dubbisuu kan eegale ennaa ta’uu ji’a 18’tti ammoo gaafilee Herregaa hojjechuu eegalee jiraa. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffa waggaa tokkotti, sadarkaa lammaffamoo wagga lama keessatti xumuruun yeroo wagga 10 ta’uu kollejii Ramphon macon jedhamu seenee. Wagga 13tti kabajaan yeroo ebbifamuu amma PHD isaa Herregaan fudhachaa kan jiru yeroo ta’uu fildii heddunille fudhachuuf karoora akka qabu dubbataa. Yeroo afuriif badhaasa Noobeliif reef ganna 12 yeroo turee kaasee filatameeraa.
6) KOLIN KARLSON
Reef ganna 2 yeroo ta’u kitaaba dubbisuu eegalee; ganna 9’ttimoo kollejii eegaleeraa. Ergaa online’n barachuun yunabarsiitii standford irra eebbifamee booda ganna 11 qaamaan yunibarsiitii seenee. Har’aa ganna 13’ti yunibarsiitii Uconn irra biology xiyyefanoo isaa uumama irra gochuun barachaa jiraa. Dhihoo kana barrun tokko tokkoo akka barresanitti Yunibarsiitichii qoqqobii akkan baruumsaa Fildii gara Afirikaa Kibbaa hin dhaqne godhu anarra kaa’ee jira jechuun akka inni dubbate barressa jiruu.
7) AKRIT JASWAL
Ganna 11’tti kollejii seenee. Yeroo kollejii seenuu qabutti Oggesaa fayyaa leenji’ee. Kan inni yaalii baqaqsanii hodhuu hojjechuu kan eegalee ganna 7’tti mucaa maatii hiyyeesaa tokkof quba harkaa ishii addan baasuuf turee. Har’aa Digirii isaa jalqaabaa yunibarsiitii Punjab irraa Botaanii, keemistiriifi Zology’n hojjechaa kan jiru enna ta’uu gara fuuldurraatti Yunibarsiitii Harvardii Medicene barachuuf karoorfatee jira.
8) KATHLEEN HOLTZ
Shamareen daa’imnii kun ganna 10 tti koleejii kaaliforniyaa eegaltee. Wagga 4 booda Filoosofiin Digirrishee duraa erga fudhatte Seeraan ammo itti fuftee.Bara 2007 waggaa 18’tti oggetti seeraa beekamtuu Kaaliforniyaa taatee. Har’aa Dhaabbata dhuunfaa tokkoof abbaa seeraa taatee hojjechuutti kan argamtu ennaa taatuu falmii hedduu taasistee mo’atte jirtii.
9) SHO YANO
Akka addunyaatti namoota IQ’n isaanii gudda ta’an keessa tokko kan inni tokko ta’ee 200 galmeessunii. Gaaffilee 1600 keessa 1500 deebisuun ganna 8 yeroo ta’u kollejii seenee. Ganna sagal yeroo ta’u barnoota yunibarsiitii barrefama, Bayoloojii , herregaafi keemistrii hordofuu kan eegalee yeroo ta’u yerooma kana ammoo qoranoo matadurrewwan garaagaraa hedduu irratti hojjechuu itti fufee. Ganna 12 tti enna eebbifamuu Oggumaa fayyaan yunibarsiiti chikagoo irra itti fufuun digirii lammafaafi saddaffa isaa Mulucular genetiksiifi Cell biology’n baratee.waggaa 18 yeroo ta’uu PHD isaa xumuruun amma ammo waan biraa itti fufee jiraa.
10) TATHAGAT AVATAR TULSI
Ganna sagalitti sadarkaa lammaffa xumuree, digirii jalqabaa ganna 10’tti fudhate, ganna 12’tti ammo Masters xumure. Ganna 21 yeroo ta’uu jechuunis yeroo hiriyootni isaa digirii jalqabaa isaanille hin argatinitti PHD isaa xumuruun biyya Hindiitti ijjolummaan sadarkaa kana irra yeroo jalqabaaf nama gahe ta’e. Har’aa waa’ee kuhantam Fiziksiin qoranoo geggesaa jira.
Afaan oromoon kan qopheesse Tamasgeen Axinaafuuti.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa141SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← RAAJIIN ARGEE!!..Lalisaa Indiris Adam- Waan Dubbifamuu qabudha..Ittiin Bohaaraa..waliif daddabarsaas!!!
DHUKKUBA TETAANASII (Dr.Guutaa Gurmeessaatiin)-Maalummaa, mallattoofi haala ittisasaa!-Waliif daddabarsaa, wal dubbisiisaa, fayyaa walii eegaa!! →